BMTM अध्यय पछि आफै उद्यमी बनिन्छ : क्याम्पस प्रमुख गौतम
रारा तालमा नाम मात्रको सफाई , पर्यटन मन्त्रीले सफा गरेको ठाउँमा रक्सीका बोतल (भिडियाे सहित) December 10, 2018
प्रदेश ५ : आर्थिक समृद्धिका लागि पर्यटनको विकास December 10, 2018
New Products for 2020 and Beyond December 10, 2018
पर्यटनको पर्खाइमा बराह ताल December 3, 2018
हितैषी हिमशिखर December 3, 2018
सिद्धबाबाको महिमा जति छ त्यति नै खतरा छ ? December 3, 2018 December 3, 2018
खुल्यो ट्रेकिङ गाइड तालीम December 3, 2018 December 3, 2018
Nepal Village Hike :Travel into their real lives with homestay December 2, 2018 December 3, 2018
ईयूको कालोसूचीबाट अझै हट्न सकेनन नेपालका विमान कम्पनीहरु December 1, 2018 December 3, 2018
No.1 Tourism News From Nepal
By ourtourism news On : April 9, 2018
विरन्जी गौतम, क्याम्पस प्रमुख
गैह्रनाफामुलक संस्थाको रुपमा जनस्तरबाट गुणस्तरीय शिक्षा सर्वशुलभ प्रदान गर्ने उद्देश्यले बि.स. २०४८ साल मंसीर २५ गते जनप्रिय बहुमुखी क्याम्पसको स्थापना भएको हो । क्याम्पसले आफ्नो शैक्षिक कार्यक्रम विकास र बिस्तार गर्दै बिज्ञान, व्यवस्थापन, मानविकी र शिक्षा संकायमा पठन पाठन गराउदै आएको छ । पछिल्लो समय क्याम्पसले २०७४ । ०७ । १० गते नेपालमा बिल्कुलै नयाँ बिषय Mountain Tourism Management बिषयमा त्रि वि बाट प्राज्ञिक स्वायत्तता प्रदान पाएको छ । नयाँ विषय के हो ? कस्ले पढ्न पाउँछन्, र नयाँ विषय प्रतिको जिज्ञासाको बारेमा आओर टुरिजम राष्ट्रिय मासिक पत्रिकाका सम्पादक टंक प्रसाद रेग्मीले क्याम्पस प्रमुख विरन्जी गौतमसँग गरेको कुराकानी । कुराकानीको संपादित अंश :
नेपालमा पहिलोचोटि नयाँ बिषय Bachelor in Mountain Tourism Management (BMTM) अध्यापन शुरु गर्नु भएको छ, नयाँ बिषय प्रति बिद्यार्थीहरुको आकर्षण कस्तो छ ?
जनस्तरबाट गुणस्तरीय शिक्षा सर्वशुलभ रुपमा प्रदान गर्ने गरी बि.स. २०४८ साल मंसीर २५ गते गैह्रनाफामुलक संस्थाको रुपमा जनप्रिय बहुमुखी क्याम्पसको स्थापना भएको हो । यसको स्थापनासँग सँगै राष्ट्रलाई आवश्यक पर्ने जनशक्ति उत्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ आफ्नो शैक्षिक कार्यक्रम विकास र बिस्तार गर्दै आएको छ । क्याम्पसमा बिज्ञान, व्यवस्थापन, मानविकी र शिक्षा संकाय अन्तर्गत सबै कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन । यसै क्रममा त्रिभुवन विश्वविद्यालय ले QAA (गुणस्तर मापन तथा प्रत्यायन) प्राप्त सामुदायिक क्याम्पसहरुलाई प्राज्ञिक स्वायत्तता प्रदान गर्ने निती लियो । यसै अनुरुप जनप्रिय बहुमुखी क्याम्पसले प्रदेश नं. ४ का लागि कस्तो बिषय सञ्चालन गर्न उपयुक्त हुन्छ र क्याम्पसका उत्पादन सजिलै बजारमा बिक्री हुन सक्दछन भन्ने बारेमा बिभिन्न बिशेषज्ञहरुको परामर्शका साथ बजार सर्वेक्षण गरयो जसको परिणाम स्वरुप यस क्षेत्रलाई सुहाउने र नेपालमा बिल्कुलै नयाँ बिषय Mountain Tourism Management को विकास भयो । क्याम्पसले यो बिषयको पाठ्यक्रम निर्माण गरि प्राज्ञिक परिषदमा पेश गरयो । प्राज्ञिक परिषदले त्यसलाई व्यवस्थापन सङ्काय डिन कार्यालयमा पठायो डिन कार्यालयले उक्त बिषयलाई परिमार्जन सहित बिषय समितिद्घारा निर्णय गरि पुनः प्राज्ञिक परिषद्मा पठायो, त्यसपछि प्राज्ञिक परिषद्ले पास गरि त्रि.वि.कार्यकारी परिषदमा पठायो र कार्यकारी परिषदले २०७४।०७।१० क्याम्पसलाई Mountain Tourism Management बिषयमा प्राज्ञिक स्वायत्तता प्रदान गरयो । यससँगै क्याम्पसले बिद्यार्थी भर्नाका लागि राष्ट्रिय पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गरयो, छोटो समयमा नै हामी आवश्यक पर्ने विद्यार्थी छनौट गर्न सफल भयौ र विद्यार्थी छनौट प्रक्रियाका क्रममा अन्तवार्ता लिदाँ ईञ्जिनियङ्गि, BBA, BCA जस्ता बिषयका तयारी गरेका र नाम समेत निकाली सकेका बिद्यार्थीले ति बिषय छाडेर यो बिषय अध्ययन गर्न तिव्र ईच्छाका साथ आएको पाईयो । यसबाट के देखिन्छ भने यो बिषय नेपालमा नै बिलकुलै नयाँ र हाम्रो जस्तो देशमा पर्यटकीय सम्भावना बोकेको हुदाँ विद्यार्थीको आकर्षण बढेको देखिन्छ ।
कसरी पढन सकिन्छ Bachelor in Mountain Tourism Management (BMTM) बिषय ?
स्नातक तहमा सेमेष्टर प्रणाली अन्र्तगत Mountain Tourism Management बिषय अध्ययन गर्नका लागि विद्यार्थीले कम्तीमा द्घितिय श्रेणीमा १०ं२ उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्दछ । क्याम्पसले भर्नाका लागि राष्ट्रिय पत्रिका तथा क्याम्पसको Web-Site www.janapriya.edu.np. मा सूचना प्रकाशन गर्दछ । सम्बन्धित बिद्यार्थीले क्याम्पसको Web-Site तथा क्याम्पस प्रशासनमा सम्पर्क गरि Application Form भर्नु पर्दछ । त्यसपछि विद्यार्थीले लिखित परीक्षा लिईन्छ जो उत्तीर्ण छन उत्तीर्ण छन त्यस्ता विद्यार्थीलाई अन्तवार्ता लिई मेरिट लिष्टको आधारमा विद्यार्थी छनौट गरिन्छ ।
कस्ले पढन पाउँदछन याे विषय ?
Bachelor in Mountain Tourism Management (BMTM) बिषय पढ्न कम्तिमा १०ं२ द्घितिय श्रेणीमा उत्तीर्ण र लिखित परीक्षा र अन्र्तावार्ता पास भएको जो कोहिले पनि पढ्न सक्दछन ।
BMTMपढ्न छात्रवृत्तिको व्यवस्था छ कि छैन ?
जनप्रिय वहुमुखी क्याम्पस नितान्त विद्यार्थीको शुल्कमा निर्भर क्याम्पस हो हाम्रा जस्ता सामुदायिक क्याम्पसलाई राज्यले शुन्य प्रतिशत लगानी गर्दछ । यो विषय आफैमा खर्चिलो र महँगो छ । यस्तै प्रकृतिका अन्य क्याम्पसमा राज्यले ठुलो लगानी गरेको छ । साथै विद्यार्थीबाट पनि उच्च शुल्क लिएको छ । त्यसकारण हामीले यस विषय संचालन गर्न Cost Besis मा शुल्क निर्धाराण गरेका छौ । यसर्थ हाल छात्रावृत्तिको व्यवस्था यसमा छैन । भविष्यमा राज्यले कुनै अनुदान दिइएमा छात्रवृत्तिको पनि व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।
BTTMनतिजा कसरी प्रकाशित हुन्छ ?
जनप्रिय क्याम्पस प्राज्ञिक स्वायक्तता प्राप्त क्याम्पस हो । यसले विषय निर्माण गर्नका साथै परीक्षा आफै सञ्चालन गर्न सक्दछ । यसका लागि क्याम्पमा परीक्षा समिति गठन भएको छ । जसमा त्रि.वि. परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय र व्यवस्थपन डिन कार्यालयका प्रतिनिधि समलग्न रहन्छ उक्त समितिले परीक्षा लिने देखि नतिजा प्रकाशन गर्ने सम्पुर्ण कार्य गर्दछ । र यसरी प्रकासन गरेको नतिजाको आधारमा त्रि.वि. परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले ट्रान्सक्रिप्ट उपलव्ध गराउँदछ ।
BTTM विषय अध्ययन पश्चात रोजगारीको अवस्थाा के छ ?
वास्तवमा नेपाल पर्यटकीय सम्भावना बोकेको देश हो । हाम्रो देशमा करिब ८–१० लाख मात्र पर्यटक वर्षमा भित्रिन्छन । यिनीहरुको वसाई छोटो छ । यस्तो हुनुमा के देखिन्छ भने नेपालमा यस सम्वन्धि अध्ययन गरेका मानिसहरुको अभाव छ । त्यस कारण यो विषय अध्ययन गर्नेहरुका लागि रोजगारीका सम्भावना नै सम्भावना वोकेको छ । अध्ययन पश्चात आफै उद्यमी वन्न सक्छन भने यस क्षेत्रमा आफ्नो ज्ञान प्रयोग गरी सफल हुन सक्छन । र देशमा भित्रिने पर्यटकको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि हुन सक्छ ।
यस विषय प्रति क्याम्पसको अगाामी योजना के छ ?
हामीले नेपालमा नै नयाँ विषयको शुरुवात गरेका छौ । यो विषय आफैमा चुनैतिपूर्ण पनि छ । यस विषय सम्वन्धि जनशक्ति अभाव छ । क्याम्पसले यस्तो जनशक्ति क्रमशः तयार गरि स्नात्तकोतर तहमा Mountain Toursm Management संचालन गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
थप केहि भन्न चाहनुहुन्छ ?
वास्तवानै जनप्रिय क्याम्पसले आज आफ्ना सिमित श्रोत र साधनलाई अधिकतम उपयोग गरी यस क्षेत्रका प्राज्ञिक व्यक्तिहरुको सहयोगमा यो विषय संचालन गरेको छ । यस क्षेत्रमा लाग्ने प्राज्ञिक व्यक्तिहरुको धेरै अगााडी देखीको सपना आज पुरा भएको छ । यस प्रति राज्यले पनि चासो देखाउनु आवश्यक छ । र यो विषय अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरुलाई पर्यटन मन्त्रालय विषेश अवसरहरुको व्यवस्था मिलाउनु आवश्यक देखिन्छ ।
Previous Post Previous post: Here is why Dead Sea in Israel should be on your 2018 travel list
Next Post Next post: वसन्त ऋतुमा २२६ आरोही सगरमाथा चढ्दै
रारा तालमा नाम मात्रको सफाई , पर्यटन मन्त्रीले सफा गरेको ठाउँमा रक्सीका बोतल (भिडियाे सहित)
प्रदेश ५ : आर्थिक समृद्धिका लागि पर्यटनको विकास
New Products for 2020 and Beyond
पर्यटनको पर्खाइमा बराह ताल
D.O.I REGD NO.222/73-74
Editor: Tanka Regmi
Phone : 9851203730
Powered by Manjil.